Ogaden News Agency (ONA) – Dhagar qabe Meles oo dhuumasho ku tagay Koonfur Afrika
Dhagar qabe Meles oo dhuumasho ku tagay Koonfur Afrika
Posted by ONA Admin	/ June 14, 2011
Waxay wararka nugu soo gaadhayaan inuu maagalada Pretoria ee ah casimadda dalka Koonfur Afrika uu si dhuumasho ah ku tagay dhiigyaba Meles Zinawi taasoo ka yaabisay saxaafadda dalkaa oo waqti dambi ka warheshay, maadaama aan horey loo sii shacin oo si kadis ah uu ku soo galay wadanka Jimcihii la soo dhaafay.
Saxaafadda dalka oo markii dambe ka faalootay socdaalka iyo arimaha siyaasada ee dalka Itobiya ayaa ku tilmaantay sababta cashiro horay uga soo mary jaaliyadaha Ogadeniya oo sidaa daraadeed loo qariyay isagoo ka baqay inuu mudaharaad xoogan ku qabsado waqti ay socdaal ku imanayso dalkiisa Xoghaya Arimaha Dibadda Mareykanka Mrs Clinton, sidaa daraadeed ayaa loo malaynayaa inuu safarkiisa uu qarsoodi uga dhigay.
Maanta (shalay) oo ay taarikhu tahay 13.6.2011 ayuu dib ugu laabanayay Addis Ababa. Shirka uu yimid oo madaxda imanaysay la sii sheegay ayaa ahaa midka wadamada Bariga iyo Koonfurta Afrika waxaana lagaga wada hadalayey arimaha gancasiga iyo amaanka.
Dowlada Koonfur Afrika ayaa ayadu raadineysa inay dawalado tayo leh ka soo baxaan African, hasa ahaatee waxaad moodaa inay taas ku guulaysanin ilaa hadda. Siyaasiyiinta iyo aqoon -yahanada dalkaa ayaa ku dooda in qaarada Afrika ay u baahantahay in laga badalo maamulada macagaga ah ee haysta hadii la doonayo inay horumar gaadho Afrika.
Jaliyada Ogadenya ee Koonfur Afrika ayaa gaadhsiisay haya’daha Xuquuda Aadana iyo Wasarada Arimaha Gudaha ee SA cadaymo muujinaya inuu kaligiii taliye Meles ka wado xasuuq (Genocide) wadanka Ogadeniya. Jaaliyadda ayaa u sheegtay haya’dahaa inuu ku caanbaxay Meles inuu safriyo been aan jirin taasoo aad mooodo hadda inay dawlada wadankan ay aad u fahan-santahay.
Jaaliyadda JOKA oo dhaq-dhaqaqiisa la socotay ayaa ogaatay in uusan ka bixin hotelkii uu daganaa ee Green Hotel oo xataa safaaradiisa uusan gaadhin.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk horta soomuna noqon kotoro baan
waxaan salamay bahada war baahinta ONA oo wada dadaal baldhan
sidoo kale waxaan leeyahay umada rere ogadeniya kan wuu gal badee is daba raaciya